गीत–संगीतले मान्छेको दुःख, पीडा बिर्साईदिन्छ – जितु - samabeshionline.com
प्रकाशित मिति : २६ आश्विन २०७५, शुक्रबार १३:०१
गति–संगीतको तरङ्गा जब उठ्छ मानिसहरु क्षणिकका लागि भए पनि आफ्ना सबै पीडाहरु भुलेर रम्न थाल्छन् । मानिसका गीत–
संगीतहरु सुन्ने अनेक धारणहरु हुन्छन् । ती मध्ये कोही आफ्नो पीडा भुलाउन त कोही गीत संगतिबाट नयाँ उर्जा आफुमा भर्न र मनोरञ्जनको लागि गीत गाउने र सुन्ने गर्छन् । यो हप्ताको कला संवादमा एक जना गायिका हुनुहुन्छ, जो छोटो समयमा नै तामाङ तथा सेलो गीतको क्षेत्रमा एकदम चर्चित गायिकाको रुपमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन सफल भइन् । पछिल्लो समयमा तामाङ चलचित्रहरुमा उनको स्वर धेरै नै रुचाइएको छ । साथै म्हेन्दो मायाँ र नेपाली आधुनिक गीतमा पनि आफ्ना सुमधुर स्वर दिएर एउटा अमिट छापसहित उनले आफुलाई उभ्याइसकेकी छिन् । ती हुन् गायिका जितु लोप्चान । गायिका लोप्चनको जन्म काभे्र जिल्ला पाँचखाल नगरपालिकाको खावास्थित बुबा बुद्ध लामा र आमा साहिली लामाको कोखबाट भएकी हुन् । प्रस्तुत छ, उनै लोप्चानसंग इकमान लामाले गीत–संगीतको विषयमा गरिएको कुराकानी:
नयाँ गीत ल्याउने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ ?
सिङ्गल एल्बम ल्याउने तयारीमा छु ।
पहिलो पटक रेर्कड अर्थात गाउनु भएको गीत कुन हो, र गाउँदाको क्षण कस्तो भयोे ?
‘चौबन्दी चोली मेरो नाकैमा बुलाकी’ मेरो पहिलो अफिसियल रेकर्डिङ हो । पहिलो पटक भएकोले अलि नर्भस फिल भएको थियो ।
गायिका बन्नु अघि तपाईलाई अरु केही भन्ने रहर थियो होला नि ?
सबैको एउटा सपना हुन्छ मेरो पनि नर्स बन्ने रहर थियो तर त्यो पूरा भएन । त्यो रहर रुपान्तरण भएर आज गायिका भनेर चिनिएकी छु ।
त्यो सोच कसरी आयो की म अब गायिका बन्छु ?
काभ्रे आईडलमा सहभागी भए पश्चात् मलाई प्रेरणा र अवसर दुबै मिलेको कारण यो क्षेत्रमा स्थापित भए । खासगरी यो सोच भन्दा नि अबसरको सृजना हो ।
गायनबाट जीविका चलाउन कठिन छ भनिन्छ नि, तपाईलाई चाहिँ के लाग्छ ?
मलाई चाँहि त्यस्तो लाग्दैन किनकी पछिल्लो समय गीत–संगीतको क्षेत्र पनि ब्यबसायिक रुपमा बिकसित हुँदै गएको छ । सायद यहि समयमा मैले यो ठाँउमा प्रवेश गर्नले मलाई यस्तो लागेको पनि हुन सक्छ तर मलाई सहज नै छ ।
देश विदेशमा हुने कार्यक्रमहरुमा कतिको अवसर पाउनु भएको छ ?
ठिकै अवसर पाएकी छु ।
तपाईको जीवनमा कुनै घटना घटेको छ, जुन प्रयाःजसो सम्झनामा आइरहन्छ ?
वि.स. २०७३ सालमा ल्होछार कार्यक्रमको शिलशिलामा कार्यक्रम सकेर डाँडापरीबाट फर्किने क्रममा भएको डरलाग्दो दुर्घटना जसलाई म बारम्बार सम्झेर झस्किन्छु ।
तपाई कसको गायन वा गायिकीबाट प्रभावित हुनुहुन्छ, किन ?
अरुणा लामा, किनकी मलाई उहाँको भोकल अत्यन्तै मन पर्छ ।
अहिले गीत–संगीतमा कतिको सुधार भएको छ जस्तो लाग्छ ?
पहिला भन्दा धेरै कुरा सिकेको र सुधार भएको महसुस गरेकी छु ।
यो क्षेत्रमा आउन चाहाने नयाँ पिँडीलाई के सुझाव दिनु हुन्छ ?
गीत–संगीत एउटा त्यस्तो माध्यम हो, जसले मान्छेको दुःख, पीडा बिर्साईदिन्छ तर त्यसलाई आफुले बुझेर मनन गरेर अगाडि बढाउन सक्यो भने मात्र यो सम्भब छ । त्यसैले गित–संगीत सिकेर यो क्षेत्रमा लाग्नु पर्छ भन्ने मेरो सुझाब हो ।
आफ्नो विचार राख्ने यो सुनौलो अवसर प्रदान गरि दिनु भएको धेरै धेरै धन्यवाद ।
दोलखाली आन्दोलनमा उत्रिए ‘तामाकोसी सेयर’ निष्कासन हुनेमा शंका,
घुम्नलायक विश्वका उत्कृष्ट शहरहरुको सूचीमा काठमाडौं
रेडियो सिटि 98.8 द्धारा भब्य होली कार्यक्रम आयोजना गरिने
सर्बियामाथि जित हात पार्दै ब्राजिल अन्तिम १६ मा पुग्न सफल
आज बिभिन्न कार्यक्रम गरी विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइँदै